New Star Light Construction မှ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား | MyJobs
/ New Star Light Construction မှ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား | MyJobs
အကွောငျး New Star Light Construction
Established in 2008 by U Kyaw Kyaw Win,arespected entrepreneur in Mandalay, the Group aspires to be the leading Real Estate and Infrastructure Development in Mandalay and Upper Myanmar.
New Star Light Construction Group’s current projects include: 1) Mingalar Mandalay, 2) Muse CBD project, 3) Mandalay Convention Center and Commercial Complex (MCCCC), 4) Mandalay Industrial Trade Center (MITC)
Vision : To promote enhance modern urban live style. (ခေတ်နှင့်အညီ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော မြို့ပြလူနေမှုစနစ်ကို တည်ဆောက်မည်။)
Mission : Provide quality products/ services to meet and exceed customer needs and expectations. (မျှော်မှန်းထားသည့် လိုအပ်ချက်ထက် ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးပြည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးမည်။)